चिनियाँ प्लेट कसरी सी गर्न? चिनियाँ ट्याब्लेटको लागि फर्मवेयर
ट्याब्लेट कम्प्युटर किन्न निर्णय, एक व्यक्ति यी उपकरणहरू चिरपरिचित निर्माताहरु साथै साना-ज्ञात कम्पनीहरु देखि दुवै को एक अविश्वसनीय प्रशस्त सामना छ। र यो केवल मोडेल distinguishes रूपमा हामी, छैन हार्डवेयर विनिर्देशों चयन गर्न हुँदा र कम्पनी र लागत को नाम अनुसार अक्सर अवस्था। चीन देखि संग्रहकर्ता लागि सम्पूर्ण कारण, शाब्दिक लगभग समान ट्याब्लेटको संग बजार बाढी। एन्ड्रोइड "चिनियाँ ट्याब्लेट कसरी फ्लैश गर्न": ल्याप्टप को खुसी मालिकको उत्पन्न हुन सक्छ कि मुद्दाहरू एक कुनै आश्चर्य "?"
किन प्रतिस्थापन सफ्टवेयर पूरा
ग्याजेटहरू काम संग शीर्ष निर्माताहरु समस्या बाट ट्याब्लेटको को मालिक, नियम, लगभग कहिल्यै हुन्छ। इरादा रूपमा सबै ठीक काम गर्दछ। तथापि, दुर्भाग्यवश, कम लागत चिनियाँ मोडेल, त्यसैले यसलाई सधैं गर्दछ। यस ट्याब्लेटको एक गर्दा पछि प्रयोगकर्ता हरेक ब्राउजरमा spontaneously, पुनर्निर्देशित (पुनर्निर्देशित) भनेर अनावश्यक संसाधनहरू हुनत एन्टिभाइरस कार्यक्रम केहि पत्ता लगाउन छैन नोटिस कहिले अक्सर अवस्थामा उत्पन्न हुन्छ।
सञ्चालन प्रणाली फाइलहरू प्रतिस्थापन कुनै पनि हार्डवेयर र सफ्टवेयर घटक को गलत सञ्चालनको घटनाको आवश्यक हुन सक्छ। वास्तवमा, कारणहरू धेरै फरक हुन सक्छ।
फर्मवेयर को चयन
नियन्त्रण कार्यक्रम को प्रतिस्थापन प्रदर्शन गर्न, राम्ररी अवस्थित वेब जानकारी परिचित हुनुपर्छ। सामान्यतया, मालिकको प्रत्येक यन्त्र, जहाँ समस्या र आफ्नो समाधान को लागि एक बहु-शाखा विशेष फोरम सिर्जना गर्नुहोस्। यसलाई विशेष, तपाईं कसरी चिनियाँ प्लेट, साथै फर्मवेयर नै सी गर्न निर्देशन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ थियो। हामी तपाईंलाई ध्यानपूर्वक पढ्न सुझाव।
फर्मवेयर आन्तरिक भण्डारण ग्याजेट भण्डारण र सञ्चालन प्रणालीको फारम छन् फाइलहरू एक सेट छ। यो भित्र, अन्य कुराहरु, कि हार्डवेयर घटक प्रबन्ध चालक छन्। गलत चयन र बुट प्रक्रिया को मामला मा, ग्याजेट बन्ने तथाकथित "ईटा", रोक्न सक्रिय हुन सक्छ। चिनियाँ ट्याब्लेटको लागि फर्मवेयर मात्र होइन संशोधन गरेर नाम पनि चयन गरिएका छन्। यहाँ एउटा उदाहरण हो। 3450DUO मोडेल लिनुहोस्। विभिन्न प्रदर्शन चालक छन् जो बी र डब्ल्यू को एक परिमार्जन छ। डब्ल्यू लागि 3450DUO / बी अपरेटिङ सिस्टम मा अपलोड, प्रयोगकर्ता खाली स्क्रिन प्राप्त हुनेछ। अर्को, हामी MTK प्रोसेसर मा निर्णय विचार गर्नेछौं।
लागि चमकता एक कार्यक्रम
ट्याब्लेट सञ्चालन प्रणाली "सी" गर्न, यो फर्मवेयर लागि बाहेक, डाउनलोड फ्लैश उपकरण कार्यक्रम आवश्यक छ। अक्सर परीक्षण संस्करण सिलना फाइलहरू आउँछ। चिनियाँ ट्याब्लेटको लागि फर्मवेयर फ्लैश उपकरण को नवीनतम संस्करण राम्रो काम। त्यसैले, म पूर्ण 5,1352 नै सिफारिस गरिएको। यो बिल्कुल निःशुल्क र कुनै उपलब्धता समस्या छ।
चिनियाँ प्लेट कसरी सी गर्न। प्रशिक्षण
तपाईं अद्यावधिक प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि, ब्याट्री पूर्ण ग्याजेट चार्ज छ निश्चित गर्नुहोस्। पनि कम्प्युटरमा Windows चलिरहेको (कम प्रश्न उठ्छन्), मुक्त यूएसबी-पोर्ट र उपयुक्त केबल आवश्यक छ। यो एक रोकावट suturing प्रक्रिया आन्तरिक मेमोरी संरचना को एक उल्लंघन गर्न सक्छ रूपमा जगेडा शक्ति प्रणाली संग एक ल्यापटप वा पीसी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अक्सर कसरी चिनियाँ प्लेट सी गर्न को प्रश्न कारण कुनै पनि त्रुटि तयारी को चरण मा स्पष्ट छैन प्रतिबद्ध भन्ने तथ्यलाई दिइएको छ। त्यसैले, तपाईं "सी" ड्राइभ मूल निर्देशिका मा एक फोल्डर सिर्जना गर्न आवश्यक छ, र यसको नाम रूसी अक्षरहरू अनुमति मात्र अंग्रेजी समावेश गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। पनि कुनै अंतराल।
यो फर्मवेयर फाइल (boot.img, system.img) अनजिप गर्नुपर्छ। ट्याब्लेट असक्षम हुन पर्छ, र आफ्नो कम्प्युटर जडान भएको छैन।
प्रणाली को "भरने"
अर्को चरण कार्यक्रम flash_tool.exe चलाउन आवश्यक छ। डाउनलोड मा एजेन्ट निर्देशिका-proshivalschika आवेदन MTK_AllInOne_DA.bin निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। तथाकथित स्क्याटर - निम्न मा आवश्यक फाइल लेआउट चयन गर्नुहोस्। यो महत्वपूर्ण छ। कसरी चिनियाँ प्लेट सी मा रुचि छ जो कोहीले, यो बारेमा कम्तिमा एक सामान्य विचार गर्नुपर्छ। फाइल उल्लेख प्रोसेसर परिमार्जनहरू आधारमा फरक नाम हुन सक्छ। त्यसैले, आजको लोकप्रिय मोडेल को लागि उहाँले MT6582_Android_scatter.txt भनिन्छ। तपाईं सक्दैन, उही प्रोसेसर अन्य उपकरणहरू यो फाइल पर्दाफास। केही अपवाद संग। अन्यथा यो चिनियाँ प्लेट कसरि मात्र सी, तर तिनीहरूले देखि ठीक रूपमा सिक्न आवश्यक छ "ईटा।"
सही गरेको छ भने, मुख्य विन्डो पत्ता फाइलहरू (Preloader, MBR ...) को सूची प्रदर्शित गर्दछ। यहाँ, एक सानो उच्च, तपाईं एक चमकता मोड चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक फर्मवेयर अपग्रेड हुन सक्छ Download + मात्र वा स्वरूप। कम से कम विनाशकारी दोस्रो। अक्सर यो छ र प्रयोग गर्नुपर्छ। तयारी को विशुद्धता बिना हामी तपाईँलाई Preloader ब्लक देखि चेक मार्क हटाउन सुझाव।
यो सबै पूरा गर्दा, तपाईंले डाउनलोड बटन थिच्नुहोस्। कार्यक्रम स्ट्यान्डबाइ मोड मा जान्छ। यसलाई कम्प्युटरमा ट्याब्लेट जडान र बुट प्रक्रिया हेर्न आवश्यक छ। सबै राम्रो जान्छ भने, विन्डो बन्द गर्न सकिन्छ, ट्याब्लेट कम्प्युटर विच्छेद र यसलाई सक्रिय छ। सफ्टवेयर सञ्चालन प्रारम्भिक डाउनलोड लामो समय, माथि धेरै मिनेट लाग्छ भरिन्छ पछि।
एक चिनियाँ कसरी सी गर्न सिक्दै द्वारा ट्याब्लेट सैमसंग वा अन्य कुनै पनि, यो सम्झनुपर्छ कि:
ब्याट्री बिजुली मा चलिरहेको कार्यक्रम ल्यापटप घनघोर गर्दा, स्थिति जसमा USB बंदरगाहों असक्षम कारण accumulator मा शुल्क को lowering छन् डरलाग्दो स्तर तल छ।
कहिलेकाहीं UBOOT ब्लक सिलना छ, र ट्याब्लेट सुरु हुनेछ। समस्या तथ्यलाई मा निहित भएको स्क्याटर फाइल मा, uboot.img बाटो सेट, र सूची जो यो छ, तर पुन: नामाकरण वर्तमान lk.bin छ।
ट्याब्लेट कम्प्युटर र स्मार्टफोन केही मोडेल कारण कम्प्युटरमा जडान प्रकृति गर्न सिलना इन्कार गर्छन्। यस मामला मा, तुरुन्तै युएसबी-पोर्ट, प्रेस र मात्रा घुमाव अप साथ पावर बटन पकड गर्न अभिवृद्धि पछि।
यसलाई व्यक्तिगत कम्प्युटर प्रणाली एकाइ को सामने प्यानल मा बंदरगाह गर्न ग्याजेट जडान गर्न सिफारिस गरिएको छ असफलता बच्न।
दुर्भाग्यवश, सबै मोबाइल उपकरणहरू चिन्ह लगाइएको "चीन मा बनाएको" छन् उच्च गुणवत्ता र स्थिर प्रदर्शन घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, ग्याजेटहरूका मालिकको चिनियाँ ट्याब्लेट n8000 फ्लैश गर्ने बारे सोध्दै हुनुहुन्छ। खैर, कसैले भनेर हातमा थियो भने "सैमसंग" को मोडेल प्रतिलिपि, तपाईं मात्र समानुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, न जो राम को आन्तरिक स्मृति 64 जीबी र2जीबी कुरा छैन। यो नक्कली मा सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कक्षहरूको भद्र 512 एमबी र निर्मित भण्डारण 1.5 जीबी "बोर्ड मा" छ। र, एकदम दुःखको कुरा, अक्सर केही महिना पछि, काम रोक हुँदा पनि ध्यान दिएर प्रयोग।
अहिलेसम्म त्यहाँ एक समाधान छ! तल, हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी ट्याब्लेट सैमसंग ग्यालेक्सी n8000 फ्लैश गर्न। विधि, पाठ्यक्रम, एक panacea, यो बिल्कुल कुनै पनि ब्रांडेड शरीर भित्र "भर्नको" हुन सक्छ जस्तो छ। तसर्थ, के अन्य बेकारी छ मा, एक मामला मा काम गर्छ।
हार्डवेयर विन्यास को परिभाषा
ट्याब्लेट राम्ररी लेगी हुनुपर्छ। को Motherboard सधैं एक प्रतीक उदाहरण Mapan MX913 डीसी लागि छ। यसलाई फेला पार्न र सम्झना (जला) गर्न आवश्यक छ। तपाईं पनि टचस्क्रिन नियन्त्रक, ध्वनि चिप र प्रोसेसर को प्रकार निर्धारण गर्नुपर्छ। यी घटक अन्तर्गत फर्मवेयर लागि देख सुरु गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, टचस्क्रीन हुन सक्छ GSL3680, वायरलेस मोड्युल - साधारण Allwinner A13 - RTL8188ETV को Realtek द्वारा, राम्रो सीपीयू रूपमा।
यो मामला मा MTK लागि माथि को सबै काम गर्ने छैन याद गर्नुहोस्। हामीलाई चिनियाँ "सैमसंग" (ट्याब्लेट) फ्लैश कसरी हेरौं।
famed जालसाजी Animates
काम गर्न कार्यक्रम Phoenuxusbpro डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। यो एक चिनियाँ र एक अंग्रेजी इन्टरफेस दुवै छ। फर्मवेयर र यो खुला खोल्न - पहिलो, आवेदन मेनुमा इच्छित छवि चयन गर्न। एकै समयमा ट्याब्लेट कम्प्युटर बन्द गरिएको छ। तपाईं प्रतिमा को बटन सुरु रंग क्लिक गर्दा हरियो हुनेछ। ट्याब्लेटमा हामी, मात्रा + प्रेस होल्ड, USB-पोर्ट संलग्न पावर बटन थिच्नुहोस्। "भर्नु" को प्रक्रिया सुरु। जब तपाईं सफल पूरा मा एउटा सन्देश प्राप्त, केबल जडान विच्छेद गर्न सकिन्छ। कि यो छ - ट्याब्लेट जाँच गर्न सकिँदैन।
कस्तो राम्रो ट्याब्लेट चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ?
A1000 मोबाइल पीसी - ठूलो ट्याब्लेट "लेनोभो"। समीक्षा, प्राविधिक विनिर्देशों र अन्य विशेषताहरु।
स्मार्टफोन के हो
ल्यापटप एसस K750J: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा मालिक
Semisynthetic एंटीबायोटिक 'cephalexin': प्रयोगको लागि निर्देशन
Anastasiya Zyurkalova - मनपर्ने अभिनेत्री ओक्साना Bayrak
सामान्य गर्व। जीवनको इतिहास
इर्कुट्स्क क्षेत्रको जनसंख्या: संख्या र जातीय संरचना